နေအိမ် → RescuePRO ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဆရာဝန်ကမ်းလှမ်းချက်
သင်၏ယခု SanDisk RescuePRO သက်တမ်းတိုးမှုနှင့်အတူယခုအဆင့်မြှင့် တင်၍ အခမဲ့ Digital Media Doctor အခမဲ့ရနိုင်သည်!
Digital Media Doctor ™နှင့်သင်စမ်းသပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်, အခြေခံစံနှုန်းနှင့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏သမာဓိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများအပေါ်အစီရင်ခံရန်. The simple to use interface in Digital Media Doctor™ makes it easy to diagnose your media with justafew mouse clicks!
အထူးကမ်းလှမ်းချက်! သငျသညျယခုသင့်ကင်မရာများအပေါ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျောကိုအသုံးပြုနေလျှင်, သို့မဟုတ်သင် HD ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေလျှင်, သို့မဟုတ်သင် 64GB ထက်ပိုကြီးတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကတ်များကိုအသုံးပြုနေလျှင်, ထို့နောက်သူက RescuePRO Deluxe မှ upgrade လုပ်ဖို့အချိန်င်. တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဇယားများအတွက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု..
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: သက်တမ်းတိုးရန်, သင်သက်တမ်းတိုးဝယ်ယူဖြည့်ပြီးမှသင်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ထိုအခါ, ဗားရှင်းအသစ်ကို install version အဟောင်းများအားအစားထိုးသင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကနေအသစ်က serial number ကို အသုံးပြု. activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
RescuePRO နျ Standard
Windows ကို Software များ $20.00
mac အတွက်ဆော့ဝဲ $20.00
*Mac OS X® 10.8 သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်
Windows ကို Software များ $30.00
mac အတွက်ဆော့ဝဲ $30.00